Ntopng: An magburu onwe ya Next Generation Network Traffic Monitor | Site na Linux
Ntopng: Ezigbo usoro nyocha okporo ụzọ Network Network
«Ntopng» bụ ihe magburu onwe ya ọgbọ nyocha ọhụụ ọhụụya bu na obu obula nke emelitere nke mbu ihe edeputara dika «Ntop», kere site nzukọ bekee nke otu aha. Injinia injinịa nke malitere software dị elu nke netwọkụ, ọtụtụ mepee ngwanrọ emeghe, n'efu na ebumnuche na-enweghị uru na / ma ọ bụ nyocha.
«Ntopng» ihu ọma ọ bụ a nyocha okporo ụzọ ntanetị nke nyochaa ojiji nke netwọk. Ọzọkwa, «Ntopng» dabere na «libpcap» (Onye na-ere akwukwo edere ka akụkụ nke mmemme kasịnụ akpọrọ TCPDump) ma edere ya n'ụzọ dị mfe nke na-enye ya ohere ịgba ọsọ na nyiwe niile «Unix», «MacOSX», nakwa banyere «Windows».
«Ntopng» n'ezie ihe ọ na-enye bụ kensinammuo na ezoro ezo web ọrụ interface maka ịgagharị ezigbo oge netwọk okporo ụzọ ozi na akụkọ ihe mere eme. N'ihi ya, ọ na-atụle a version nke arụmọrụ dị elu na obere ihe oriri, ngwaahịa nke mgbanwe okike nke gara aga «Ntop».
Otu n'ime ọtụtụ uru nke «Ntop», ewepu ya obi ụtọ na ọtọ web interface, ọ bụ ya ike na-agwa onye ọrụ banyere ya otutu network ogbugba ndudika «ARP, ICMP, Decnet, DLC, IPX, Netbios, TCP, UDP» na ọtụtụ ndị ọzọ.
1.3.1 Maka Ubuntu
1.3.2 Maka DEBIAN
Gosi okporo ụzọ netwọkụ: Ma ezigbo oge ma na-arụsi ọrụ ike ụsụụ ndị agha.
Geolocate na machie ndị ọbịa: Na map ala.
Mata engine: Iji weghara ndị ọbịa na-enyo enyo na enyo.
Na-aga n'ihu nlekota netwọk ngwaọrụ: Via SNMP v1 / v2c.
Tunneling protocol de-tunneling: Gụnyere GTP / GRE.
Nyochaa okporo ụzọ IP: Na-aga ọbụna ịkọwaa ya dịka isi / ebe ọ na-aga.
Mepụta onu ogugu nke netwok: Iji teknụzụ HTML5 / AJAX.
Nye nkwado zuru ezu maka usoro ntanetị ugbu a: Gụnyere IPv4 na IPv6.
Kpee banyere ojiji nke IP protocol: Ọbụna ịga nke ọma site na ịkọwapụta ya site n'ụdị usoro.
Ndakọrịta zuru oke na usoro nchekwa 2 Layer (Layer-2): Tinyere ọnụ ọgụgụ ARP.
Mepụta akụkọ ogologo oge na metrik netwọk: Gụnyere ogbugba ndu na ngwa.
Lee ndepụta isi ihe ngosi: Top talkers (transmitters / receivers), Top ASs, Top L7 Ngwa.
Chekwaa ọnụọgụ okporo ụzọ na-aga n'ihu na diski: Iji mee ka nyocha na nyocha n'ọdịnihu ga-eme.
Mara njirimara HTTP: Na -ewe uru nke nchekwa nchọgharị ọrụ nyere site Google y Http Blacklist.
Hụ okporo ụzọ ntanetị: N'etiti ọtụtụ njirisi dịka Adreesị IP, Port, L7 Protocol, Performance, Autonomous Systems (AS).
Nkwado maka izipu data nyochaa: Iji MySQL, ElasticSearch na LogStash. N'ihi na MySQL na-agbakwunye mmekọrịta mmekọrịta akụkọ ihe mere eme data ngagharị.
Nchọpụta usoro ngwa: Dị ka Facebook, YouTube, BitTorrent, n'etiti ndị ọzọ, na-eji teknụzụ nDPI (ntop Deep Packet Inspection).
Ileba anya ma kọọ akụkọ ntanetị: Gụnyere arụmọrụ ndụ, ntanetị na ngwa ngwa, Oge Mbugharị Oge (RTT), ọnụọgụ TCP (mbugharị, ngwugwu enweghị ọrụ, ngwugwu furu efu), na bytes na ngwugwu ebufe.
«Ntopng» dị na nsụgharị atọ:
Obodo: Efu na ụdị ihe mepere emepe (Nọrọ na GitHub) ikikere n'okpuru GNU GPLv3.
Cheta na: The nsụgharị Ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ enye ụfọdụ atụmatụ ndị ọzọ bara uru karịsịa maka Ndị SME ma ọ bụ òtù ndị ka ukwuu. Na usoro ya nke inwe na ojiji (ọnọdụ ma ọ bụ oke) na-atụgharị uche na ha Ọgwụgwụ ikikere Onye ọrụ (Onye njedebe njedebe License Agreement - UELA).
Ndi an-kpọ ọdịnaya nke ntopng.conf faịlụ
Ihe gbanwere nke faịlụ ntopng.conf
Cheta na: Naanị ihe ntanetị achọrọ (s) achọrọ ka agbakwunye (gbanyere).
Ndi an-kpọ ọdịnaya nke ntopng.start faịlụ
Malitegharịa ekwentị ọrụ Ntopng
Gbaa nchọgharị na weebụ na mmalite ụzọ Ntopng
Ntopng nbanye ihuenyo
Cheta na: Aha njirimara na paswọọdụ ndabara bụ «admin» - «admin»
Ntopng isi ihuenyo
Dị ka anyị pụrụ ịhụ «Ntopng» bụ a fabulous ngwá ọrụ software n'efu nke na-enye anyị ọmarịcha ike na uru na ọkwa nke nlekota oru nyocha netwok nke kọmputa anyị. Maka ndị na-achọ iji ngwa dị elu karịa nkịtị ka ha nyochaa akụkụ ụfọdụ nke teknụzụ na sistemụ arụmọrụ n'uju, «Ntopng» ọ bụ ihe magburu onwe nhọrọ na-agbalị.
Ọ bụrụ na ijitụla otu ihe ahụ, kọọrọ anyị mmetụta gị na ahụmịhe anyị site comments, nke mere na ọnụ anyị na-ọgaranya ihe ọmụma nke dum Free Software na Open Source Community.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Ntopng: Ezigbo usoro ntanetị ntanetị na ntanetị